03/26/13 ~ Myanmar Forward
ပွင့် လင်းမြင် သာမှု ရှိလာ သည့် မြန်မာ့ တပ်မတော်
Posted by drmyochit Tuesday, March 26, 2013, under ဆောင်းပါး |2comments
ယခု မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ တွင် နေပြည် တော်၌ ကျင်းပပြု လုပ်မည့် (၆၈) နှစ်မြောက် တော် လှန်ရေးနေ့ (တပ်မတော်နေ့) တွင် စစ်ရေးပြ စစ်ကြောင်း ကြီးများနှင့် ပါဝင် ချီတက် အလေးပြု ကြမည့် လေကြောင်းရန် ကာကွယ် ရေး တပ်ဖွဲ့ ကိုယ် စားပြု စစ် ကြောင်းက ယခု နှစ်တွင် မြန်မာ့ တပ်မတော် သုံး လေ ကြောင်းရန် ကာကွယ် ရေး မြေပြင်မှ ဝေဟင် ပစ် ဒုံးကျည် များကို စစ်ရေးပြ ပွဲသို့ တက်ရောက် ကြည့် ရှု ကြမည့် အများ ပြည်သူ များ လေ့လာ ကြည့်ရှု နိုင်မည် ဖြစ် သည်။
ထို့အပြင် BTR.3U အမျိုး အစား စစ် သည် တင် သံချပ် ကာယာဉ် (Armoured Personnel Carrier) များ၊ အကြီး စား ကာ ကွယ်ရေး ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံ များမှ ထုတ်လုပ်သည့် နောင်ရိုး ဂျစ်များ ကိုလည်း ပြသ သွား မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ Myanmar Military Power ဖေ့စ်ဘွတ် စာမျက်နှာ များတွင် ဖော်ပြ ထားသည်။ ယခင်က မြန်မာ့ တပ်မတော် စစ် လက်နက် ပစ္စည်း အသစ် အဆန်း များကို လျှို့ဝှက် အဆင့် သတ်မှတ် ခဲ့ကြ သော်လည်း ယခု ကဲ့သို့ ထုတ်ပြ ခြင်းမှာ မြန်မာ့တပ် မတော် အနေဖြင့် ပွင့်လင်းမြင် သာမှု ပိုမို ရှိ လာ ခြင်း ဖြစ် သည်။ ယခု ပြ သမည့် မြေ ပြင်မှ ဝေဟင်ပစ် ဒုံးကျည် အမျိုး အစား မှာ S-125 Pechora အမျိုး အစား ဖြစ်ပြီး ရုရှား သမ္မတ နိုင်ငံ ထုတ် စစ် လက်နက် ပစ္စည်း ဖြစ်သည်။ နေတိုး (NATO) က SA-3 GOA ဟု အမည် ပေး ထား သည်။
လောင် စာ ခဲ သုံး တာ တို ပစ် ဒုံး ကျည် အမျိုး အစား ဖြစ်သည်။ အလွယ် တကူ ရွှေ့ပြောင်း သယ် ဆောင် နိုင်ပြီး ဒုံး ကျည် သွားနှုန်းမှာ အသံထက် ၃ ဆမှ ၃ ဆခွဲ ထိ ရှိသည်။ ရေဒီယို လမ်းညွှန်ပဲ့ ထိန်းပါ မြေ ပြင်မှ ဝေဟင်ပစ် ဒုံးကျည် အမျိုး အစား ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
Posted by drmyochit Tuesday, March 26, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ |3comments
ဧရာ ၀တီ တိုင်းဒေ သကြီး ဟင်္သာ တခရိုင် လေး မျက်နှာ မြို့နယ်မှ ငွေချေး ယူမှုနှင့် ပတ် သက်ပြီး ခရိုင် တရား ရုံး၏ အဆုံး အဖြတ် အား မျှတမှု မရှိဟု ယူဆ ရ၍ အမျိုးသား လွှတ်တော်က ကွင်း ဆင်း စစ် ဆေး မှုများ ပြု လုပ် ကာ စုံစမ်း ဖော် ထုတ် သွား မည် ဖြစ် ကြောင်း သတင်း ရ ရှိ သည်။
မိတ်ဆွေ တစ်ဦး ၏ ငွေကျပ် ခြောက်သိန်း ချေးယူ မှုတွင် နှုတ်ဖြင့် အာမခံပေး ခဲ့သည့် ကွယ် လွန် သွားသော ခင်ပွန်း သည်က ပါဝင် ပတ်သက် နေ သဖြင့် ဇနီး ဖြစ်သူ မစန်းအား ကျပ် ၅၃၀,၀၀၀ ပေး လျော်ရန် တရား ရုံးက အမိန့် ချမှတ် ခဲ့ကြောင်း၊ အမှန် ချေးယူ သူက ကျန်ငွေ ကျပ် ၅၃၀,၀၀၀ ကို ပေး ဆပ်ခြင်း မရှိ၊ တရားရုံး သို့ မလာ ရောက် ဟူသော အကြောင်း ပြချက် ဖြင့် မစန်း၏ အိမ်၊ ခြံ၊ မြေကို ကျပ် ခြောက် သိန်းဖြင့် တန်ဖိုး ဖြတ်ကာ ငွေထုတ် ချေး သူအား သိမ်း ယူရန် တရား ရုံးက ထပ်မံ ဆုံးဖြတ် ခဲ့ကြောင်း ပြည်သူ တို့၏ တိုင်ကြား စာနှင့် အ သ နား ခံစာ ကော် မတီ ၏ အစီ ရင် ခံစာ တွင် ဖော်ပြ ပါ ရှိ သည်။
မူလက ကျပ် ခြောက် သိန်း ချေး ယူ ပြီး တစ် နှစ် ခန့် အကြာ (အတိုး/ အရင်း) ကျပ် ၁၂ သိန်းဟု သတ်မှတ် သော အဆိုပါ အမှု တွင် အမှန် ချေး ယူ သူက ၎င်း ပေးဆပ် ရမည့် ကျပ် ၅၃၀,၀၀၀ ကို လုံးဝ မပေး ဆပ်ရဘဲ မစန်း (အာမခံ ပေးသူ ခင် ပွန်း သည် ၏ ဇနီး) ပိုင် အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ၊ လှည်း၊ သစ်ခွဲ သားနှင့် အိမ်ရှိ ပစ္စည်း အားလုံး (တန်ဖိုး ကျပ်သိန်း ၆၀ ခန့်)အား ငွေချေး သူက အပြီး အပိုင် သိမ်းယူ သွား ခဲ့ခြင်း၊ ငွေ ချေး ယူ သူ သည် တရား ရုံးသို့ သုံးကြိမ် လာရောက် ပါလျက် လုံးဝ လာရောက်ခြင်း မရှိဟု အဆုံး အဖြတ် ပြု ခဲ့ခြင်း၊ တရား လွှတ်တော် ချုပ် ကလည်း အောက်ခြေ ဖြစ် ရပ် မှန်များ အပေါ် လျစ်လျူ ရှု ခဲ့ခြင်း စသည့် အခြေ အ နေ များကြောင့် ယင်း အမှု ကို ပြန်လည် စစ် ဆေး ရန် ဖြစ် လာ ကြောင်း အ စီ ရင် ခံ စာ က ဆို သည်။
အ ထက် ပါ တရား စီရင် မှုအား ပြည်ထောင်စု တရား လွှတ်တော် ချုပ်က ဖြစ် ရပ် မှန် ဖော် ထုတ် ၍ ခုံ ရုံး ဖွဲ့ပြီး မဖြစ် မနေ ပြန်လည် စစ်ဆေး ရန်နှင့် လွှတ်တော် ကလည်း စုံစမ်း ရေး ကော် မရှင် တစ်ရပ် ဖွဲ့ စည်း ကာ ဖော် ထုတ် ရန် အ တွက် အမျိုး သား လွှတ် တော် ကိုယ် စား လှယ် ဦးနုက ဆွေး နွေး တင် ပြ ခဲ့ ခြင်း ဖြစ် သည်။
ယင်း အမှုနှင့် ပတ် သက် ၍ အမျိုး သား လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦး ခင် အောင် မြင့်က “ကော် မတီ အ နေဖြင့် ဖြစ် ရပ်မှန် ဖော်ထုတ် ရေး အတွက် ကွင်း ဆင်း ဆောင် ရွက် ရန် ဆုံး ဖြတ် ခဲ့ ခြင်း ဖြစ် သည်။
ထို့ အပြင် အဆို ပါ အ မှုကို ပြန် လည် စစ် ဆေး သင့် ကြောင်း ကော်မ တီက ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင် ဘာ ၂၀ တွင် ပြည် ထောင် စု အစိုး ရ အ ဖွဲ့ သို့ တိုက် တွန်း ခဲ့ ကြောင်း၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁၂ ရက်တွင် ကြယ်ပွင့်ပြ မေး ခွန်း ဖြင့် မေး မြန်း ခဲ့ သော် လည်း တရား လွှတ် တော် ချုပ် တ ရား သူကြီး ဦး မြ သိမ်းက ခရိုင် တရား ရုံးချုပ် ၏ အဆုံး အဖြတ် မှန်ကန် ကြောင်း သာ ဖြေ ဆို သွား ခဲ့ ကြောင်း လည်း အ စီ ရင် ခံစာ အရ သိရ သည်။
အ ထက် ပါ ဖြစ် ရပ် များ ကြောင့် မ ဏ္ဍိုင် ကြီး သုံး ခု အ နက် တရား ရေး မဏ္ဍိုင် သည် လူပြော သူပြော အများ ဆုံး ဖြစ် ကြောင်း လည်း ကိုယ် စား လှယ် များ နှင့် ပြည် သူ များ က မှတ် ချက် ပြု ထား ခြင်း ဖြစ် သည်။
သမီး ဖြစ်သူကို အဓမ္မ ပြုကျင့်ရန် ကြံစည် သူကို အမှု ဖွင့်ရာ ဖခင်ဖြစ်သူ ပိုင်နက် ကျူးလွန် မှုဖြင့် ပြန်လည် အမှုဖွင့် ခံရ
Posted by drmyochit Tuesday, March 26, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ |2comments
သထုံ မြို့ တွင် နေထိုင် လျက် ရှိသော လေး တန်း ကျောင်းသူ လေး အား အဓမ္မ ပြု ကျင့် ရန် ကြံ စည် သူ ကို ဖခင် ဖြစ်သူမှ အမှု ဖွင့် ရာ တရားခံ မိသား စုမှ ပိုင်နက် ကျူးလွန် မှုဖြင့် ပြန် လည် တရား စွဲဆို မှု တွင် လေးတန်း ကျောင်းသူ လေး၏ ဖခင်မှာ ရင် ဆိုင်နေ ရကြောင်း သိရ သည်။
ဖေဖော် ၀ါရီလ ၄ ရက်နေ့ တွင် အသက် ၁၀ နှစ် အရွယ် စတုတ္ထ တန်း ကျောင်း သူ လေးကို ကျောင်း ကြို ကျောင်း ပို့ ဘေး တွဲ ဆိုက်ကယ် မောင်းနှင်သူ ကိုပြည့် ဖြိုးအောင် အသက်၂၂ မှ ကျောင်း ဆင်း ချိန်တွင် အိမ် သို့ ပြန်လည် မပို့ဘဲ လူသူ ပြတ်လတ် သည့် သထုံမြို့ လေ ယာဉ် ကွင်း ဟောင်း ရှိရာ နေရာ သို့ ခေါ်ဆောင် သွားကြောင်း၊ ယင်း လေယာဉ် ကွင်းပျက် အနီးတွင် အထက (၁) ကျောင်း အနောက်ဘက် အုတ် တံတိုင်း ရှိရာ သို့ စတုတ္ထ တန်း ကျောင်း သူလေး အားခေါ် ဆောင် သွားပြီး တရားခံ ကိုပြည့်ဖြိုး အောင်က နောက် ဆိုရင် နင်နေ ရမယ့် ကျောင်း ကို ပြမည် ဟု ဆိုကာ အုတ်တံ တိုင်း တဖက် ကျောင်း အတွင်း ဘက်သို့ ခေါ်ဆောင် ရန်ကြိုး ပမ်း ခဲ့ကြောင်း၊ ကလေးမှာ ကြောက်ရွံ့ကာ နေအိမ် သို့ ပြန် ပို့ရန် ပြော ဆိုသော အခါ ဆိုက် ကယ် ရှိရာ သို့ပြန် လည် ခေါ်ဆောင် ကာ၊
ဆိုက်ကယ် ပေါ်တွင် ကလေး အားထိုင် ခိုင်းပြီး ကလေး၏ ခန္ဒာကိုယ် အနှံ့ ကို ပွတ် သတ် ကာ အဓမ္မပြု ကျင့်ရန် ကြိုးပမ်း ခဲ့ကြောင်း၊ ကလေး မှာ ကြောက်လန့် ငိုယိုကာ အိမ် သို့သာ ပြန်လည် ပေးပို့ရန် ပြောဆို နေ သဖြင့် နောက် ဆုံးတွင် အိမ်သို့ ပြန် လိုက် ပို့ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။. “အ ရင် တုန်း က ဆိုရင် ၃နာရီ ကျောင်း ဆင်းရင် အိမ်ကို ၃ နာရီ ၁၅ လောက် ဆို ရောက်ပြီ၊ အဲ့ နေ့က ၄ နာရီ ထိုးခါနီး လောက်မှ ပြန် ရောက်တယ်။ ဆိုက်ကယ် ဘေး တွဲ မောင်းတဲ့ သူက အရင်ဆို လမ်းထိပ် မှာပဲ ကလေးကို ဆင်း ခိုင်းတာ အဲ့နေ့က အိမ် အထိ လိုက်ပို့ တယ်။ ပြီးတော့ ဆိုက် ကယ် ပျက် လို့ နောက် ကျ သွား တာ ပါ တောင်း ပန် ပါ တယ် ဆိုတဲ့ စကား ကို အကြိမ် ကြိမ်ပြော တယ်။ ကလေးကလည်း ငို မဲ့ မဲ့ဖြစ် နေတယ်။ ပြီးတော့ အဲ့ လူက မပြန်ပဲ အိမ် နားမှာ ၀ဲလည် ၀ဲလည် လုပ် နေတယ်။ ဒါနဲ့ ကလေး ကို မေးကြည့် တော့မှ အကုန်သိရတယ်။
အဓမ္မ ကျင့်ဖို့ ပဲကြံ တာ အထ မမြောက်ဘူး ဆို တော့မှ ကျွန်တော် တို့လည်း စိတ်အေး ရတယ်” ဟု စတုတ္ထန်း ကျောင်းသူ လေး၏ ဖခင်က ပြော ကြား သည်။ ထို ဆိုက်ကယ် ဘေးတွဲ မောင်းနှင်သူ ကို ပြည့် ဖြိုးအောင်မှာ တစ်ရပ် ကွက်ထဲ တွင် နေထိုင် သူဖြစ် သဖြင့် နောက် နောင်တွင် တခြားသော ကလေး များကို အ ဓမ္မ ပြုကျင့်ရန် ကြံစည် မှုများ မဖြစ်စေ ရန်နှင့် ဆုံးမ နိုင်ရန် ကိုပြည့်ဖြိုး အောင်၏ မိ ဘများ ထံသို့ သွား ရောက်ကာ အဖြစ် အပျက်ကို ပြောကြားရာ မိဘများမှာ လက် မခံ နိုင်ပဲ “ကလေး ပြောတိုင်း လျှောက် မယုံနဲ့” ဟုပြော ကြား ကာ စတု တ္ထတန်း ကျောင်း သူလေး ၏ ဖခင်ကို ထိုးကြိတ် ကျကြောင်း၊ ထို့ ကြောင့် သထုံမြို့ နယ် ရဲ စခန်း သို့ သွား ရောက်ကာ ကို ပြည့် ဖြိုး အောင်၏ လုပ်ရပ် အပေါ် ခေါ် ယူ ဆုံး မပေးရန် တိုင်ကြား ခဲ့ရာ စခန်း မှူးမှာ ဖြစ်စဉ်မှာ သာမာန် မဟုတ်သည့် အတွက် ကိုပြည့်ဖြိုး အောင်ကို ခေါ်ယူ စစ်ဆေး ခဲ့ရာ ၀န်ခံ သဖြင့် ပြစ်မှု ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၇၆/ ၅၁၁ ဖြင့် အမှု ဖွင့် ခဲ့ကြောင်း၊
ထိုသို့ အမှု ဖွင့်ပြီး လေးရက် ခန့် အကြာ တွင် တရားခံ မိသားစု ဘက်မှ စတု တ္ထတန်း ကျောင်း သူလေး၏ ဖခင် အား ပုဒ်မ ၄၅၁ ပိုင်နက် ကျူးလွန်မှု၊ ပုဒ်မ ၃၂၃ နာ ကျင်စေ မှု တို့ဖြင့် ပြန်လည် အမှု ဖွင့်ခြင်း ကို ခံ ရကြောင်း သိရသည်။ “ကျွန်တော် သူတို့ အိမ်ကို သွားတုန်း ကလည်း ၀င်ခွင့် တောင်းပြီး မှ ၀င်တာပါ။ ကိုယ်ထိ လက်ရောက် လုပ်ဖို့ မပြောနဲ့ လက် နဲ့တောင် မရည် ရွယ် ခဲ့ပါဘူး။ သူတို့ သားကို နောက်နောင် ဒီလို အပြု အမူ မျိုးတွေ မလုပ် အောင် မိဘ တွေ အနေ နဲ့ သွန်သင် ဆုံးမ နိုင်အောင် သွားပြီး ပြော တာ ပဲ ရှိ တာ ပါ။ ကိုယ်ထိ လက်ရောက် ကျူးလွန် တာက သူတို့ ဘက် က ကျူး လွန် တာ ပါ။ ကျွန်တော် အခု အမှု ဖွင့် တယ် ဆို တာ က လည်း စခန်း မှူးက အဓမ္မ ပြုကျင့် တဲ့ အဆင့်ကို ကျူးလွန် လို့ မရ လိုက်ပေ မယ့် အဓမ္မ ပြုကျင့်ဖို့ ကြိုးစား တဲ့ အတွက် ပြစ် မှုမြောက် တယ် ဆို လို့ပါ။
ကျွန်တော့် ကို တကယ် ထိုး တာ ကိုတောင် ကျွန်တော်က အမှု မဖွင့် ခဲ့ပါဘူး။ သူတို့ ဘက် ကနေ ကျွန်တော့် ကို အမှု ဖွင့် ချင် တယ် ဆိုရင် ကျွန်တော် တိုင်တဲ့ နေ့ က တည်း က တိုင် လို့ ရတယ်။ သူတို့ လာတောင်း ပန်တာကို ကျွန်တော်က လက်မ ခံ လို့ လေးရက် လောက် နေမှ အမှု ကို ဖန်တီး ပြီး ဖွင့်တာ။” ဟု စတု တ္ထတန်း ကျောင်း သူလေး ၏ ဖခင်က ပြော ကြားသည်။ “ကလေး ကို အဓမ္မ ပြု ကျင့်ဖို့ ကြံ စည်လို့ ပြစ် မှုမြောက် လို့ အ မှု ဖွင့် ပေး လိုက် တာပါ။ ဟို ဘက်က မိ ဘတွေက ဆေး စာတွေနဲ့ သူတို့ ကိုယ်ထိ လက်ရောက် ကျူးလွန် ခံရ တယ်လို့ ပြန်ပြီး တိုင်ကြား လာတဲ့ အတွက် ကလေးရဲ့ ဖခင်ကို အမှု ပြန်ဖွင့် လိုက် တာပါ။ ဥပဒေ အ တိုင်းပဲ ကျွန်တော် တို့ လုပ်စ ရာ ရှိ တာကို လုပ်ပေး တာပါ။”ဟု သထုံမြို့ နယ် ရဲ စခန်း မှ တာဝန် ရှိသူ တစ် ဦးက ပြော ကြား သည်။
ယခု အခါ စတုတ္ထ တန်း ကျောင်း သူလေးနှင့် သူ မ၏ ဖခင် တို့ ရင် ဆိုင်နေ ရသော အမှု များကို ဖြေ ရှင်းရန် ရှေ့ နေ မငှား ရမ်း နိုင်သည့် အတွက် အစိုး ရရှေ့ နေနှင့် အမှု ကို ဖြေရှင်း နေ ရသော် လည်း ထိရောက် မှုမရှိ ဖြစ် နေကြောင်း၊ သထုံ မြို့ တွင် ယခု ကဲ့သို့ အ သက် မပြည့် သေးသူ ကလေး သူငယ် များကို အဓမ္မ ပြုကျင့် မှု များ စွာရှိပြီး ကလေး မိဘ များမှာ အမှု မဖွင့် ရဲကြပဲ ငွေကြေး ညှိုနှိုင်း ခြင်း များ ဖြင့်သာ ပြီး ဆုံး သွား သည် က များကြောင်း၊ ထိုသို့ အ မှု မ ဖွင့် ပဲ ထား သဖြင့် ကလေး သူငယ် များ အပေါ် လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ စော် ကား သူ များမှာ ပိုမို အတင့် ရဲ လာခြင်း ဖြစ်သော ကြောင့် အမှု ဖွင့်ကာ တိုင်ကြား လိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း စတုတ္ထတန်းကျောင်းသူ၏ ဖခင်က ပြောကြား သည်။
“သ ထုံ မှာက ဒီလို အ မှုတွေ အများ ကြီးပဲ။ တရား စွဲရင် လည်း အချိန် အကြာ ကြီး ဆွဲပြီး စစ် တယ်။ နောက်ဆုံး ငွေနဲ့ ညှိုနှို င်း တာနဲ့ ပဲ ပြီးသွား တာက များတယ်။ တချို့ ကလေး တွေ ဆိုရင် ဖားကန့် က အနှိပ်ခန်း တွေကို အပို့ ခံ ရ တာတွေ တောင်ရှိ တယ်။ ခံလည်း ခံရ သေးတယ် ပြီးရင် ငွေ ရှိတဲ့ လူတွေ ကပဲ နိုင် သွား တာက များနေ တယ်” ဟုလည်း စတု တ္ထတန်း ကျောင်း သူ၏ ဖခင် က ထည့် သွင်းပြော ကြားသည်။
မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့ ညပိုင်းက ပဲခူးတိုင်း အနောက်ပိုင်း ကြို့ပင်ကောက်မြို့တွင် လူအုပ်စုဖြင့် နေအိမ်၊ဆိုင်ခန်းများကို ဖျက်ဆီးမှုဖြစ်ပွား
Posted by drmyochit Tuesday, March 26, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်ပိုင်း) ကြို့ပင်ကောက်မြို့တွင် မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့ ညအချိန်က မြို့ပေါ်ရပ် ကွက်ရှိ နေအိမ်၊ဆိုင်ခန်းများကို လူအုပ်စုဖြင့် ဝိုင်းဝန်း ဖျက်ဆီးမူ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်ရပ်ကြောင့် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များ၏ နေအိမ် ၁၅ လုံးဝန်းကျင်၊ ဈေးဆိုင်ခန်းအချို့၊ မော်တော် ယာဉ် နှစ်စီးနှင့် ဆိုင်ကယ် သုံးစီး ပျက်ဆီးမှု ဖြစ်ပွား ခဲ့ကြောင်းနှင့် ရန်ကုန်-ပြည်လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ဗ လီကျောင်း တစ်ခုမှာလည်း ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
ကြို့ပင်ကောက်မြို့ မတ်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် အခြေအနေမှာမူ တည်ငြိမ်လျက်ရှိပြီး ဒေသခံလူများမှာမူ နောက်ဆက် တွဲ ပြဿနာများ ဖြစ်ပွားလာမည်ကို စိုးရိမ်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ ထို့အပြင် ကြို့ပင် ကောက်မြို့နှင့် အနီးဝန်းကျင် မြို့ရွာများ၌လည်း ကောလာဟလ သတင်းများ အမျိုးမျိုး ထွက်ပေါ်လျက်ရှိပြီး ဈေးဆိုင် ခန်းများ ပိတ်သိမ်းထားကြောင်း သိရသည်။
ယခုရက်ပိုင်းများအတွင်း ပဲခူးတိုင်း အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင် ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ဖြစ်စဉ်များ ဆက်တိုက် ရှိနေပြီး မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့ညက လည်း အုတ်ဖိုမြို့တွင် ရှိနေသော ဗလီတစ်ခုကို ဖျက်ဆီးရန် အတွက် လူအုပ်စုလိုက် ရောက်ရှိလာသည်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် နယ်မြေခံ တပ်မတော် သားများက တားဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း အုတ်ဖိုရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောပါသည်။
လတ်တလော အနေဖြင့် ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများ လုပ်ဆောင်ရန် ကြိုးပမ်းနေသူများကို ဖမ်းဆီး ရမိခြင်း မရှိသေး ဘဲ မတ်လ ၂၆ ရက်နေ့ ညပိုင်းမှ စတင်ပြီး ကြို့ပင်ကောက်၊ အုတ်ဖို၊ ဇီးကုန်းအပါအ၀င် ပဲခူးတိုင်း အနောက် ဘက်ခြမ်းရှိ မြို့နယ် ငါးမြို့နယ်ကို ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တိုင်းရဲ တပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ တာဝန်ကျ အရာရှိ တစ်ဦးက မတ်လ ၂၆ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် Eleven Media Group သို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မတ်လ ၂၆ ရက်နေ့ ည ၆ နာရီ ၃၀ မိနစ်အချိန်က ရရှိသော သတင်းများအရ ကြို့ပင်ကောက်မြို့ကို ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန် လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ကြို့ပင်ကောက်မြို့အတွင်း ဖျက်ဆီးခံရမှုအခြေအနေကို မတ်လ ၂၆ ရက်နေ့က မြင်တွေ့ရစဉ်
News From: Eleven Media Group
မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ဂန့်ဂေါ ခရိုင် အ တွင်း ဘုရား ပွဲတော်၊ လှူပွဲတော် များတွင် အရက် ဆိုင်များ ဖွင့်လျှစ် ရောင်းချ သည့် အ တွက် ဘုရား ပွဲတော် အတွင်း ဆူ ပူခြင်း၊ မူးရစ် သောက် စားသူ များပြား ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ် နေပြီး ပွဲတော် မကရ သည့် အထိ ဖြစ်ပေါ် လျက် ရှိ ပါ သည်။
တပေါင်း လပြည့် နေ့တိုင်း ကျင်းပ ပြုလုပ် သည့် ရေရှင် ကျေးရွာ၊ တောင့်တက် ကျေးရွာ၊ ပြင်လယ် ကျေး ရွာ၊ ကြန်တော ကျေးရွာ၊ ကံကြီးကျေးရွာ ချီချောင်း သောက် အညာ (၅) ရွာ စုပေါင်း ပြုလုပ် သည့် တောင့် တက် ကျေးရွာ ရှိ ဗုဒ္ဓ ပူဇ နိယ ပွဲ တော်တွင် (၂၄- ၃- ၂၀၁၃) ရက်နေ့ ညတွင် အရက် သမား များ ဆူပူ အကြမ်း ဖက် မှုကြောင့် ပွဲ မက ရသည့် အတွက် ဇာတ်ပွဲ ရပ်နား ရသည် အထိ ဖြစ်ခဲ့ ပါသည်။
ယခုလို ဖြစ်ပွား ရခြင်းမှာ ပွဲတော် အတွင်း အရက်ဆိုင်များ ၁၀ ဆိုင်ခန့် ဖွင့်ခွင့် ပြုခြင်း တောင့် တက်ကျေး ရွာတွင် တော အ ရက် ချက်ဖို့ ၅ ဦးခန့် ခွင့်ပြုထားခြင်း၊ ပြင်လယ် ကျေးရွာတွင် အရက်ဖို ၂ ဦးခန့်ရှိ သည့် အပြင် ပွဲတော် ကျင်းပရေးတွင် ဖြတ်လာရသည့် ကဲကြီးကျေးရွာတွင် အရက်ဆိုင်ပေါင်း ၁၀ ဆိုင်ခန့် ရှိပြီး ပွဲတော် အတွင်း ပါဝင်ခွင့် ရောင်းချကြသည့်အတွက် ဘုရား ပွဲတော်နဲ့ မူတော့ဘဲ အရက် ဈေးရောင်း ပွဲတော် ကဲ့သို့ ဖြစ်နေပါသည်။ အစိုးရ အနေဖြင့် တရားဝင် ခွင့်ပြုသည် ဖြစ်စေ၊ မပြုသည် ဖြစ်စေ အရက် ဆိုင် များကို စည်းကြပ် သင့်ပါကြောင်းနှင့် ကျေးရွာ အုပ်စု တိုင်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ စာရေးများ ရှိသော် လည်း တရား မ၀င် အရက်ဆိုင်များ လွတ်လပ်စွာဖြင့် ထားသည်ကို ကြည့်ခြင်း အားဖြင့် ပက်သက် မှုများ ရှိ နေကြောင်း၊ ပြည်သူများ သိရှိသော်လည်း မပြောရဲ မဆိုရဲ ဖြစ်နေကြသည်။ အရက် သမား များကြောင့် ဘုရား ပွဲတော် သရုပ်ပျက်ခြင်း၊ ဆူပူခြင်းများ ဖြစ်နေသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာတို့ မျက်ကွယ် ပြုမနေ ဘဲ ထိထိ ရောက် ရောက် အရေးယူ ဆောင်ရွက် ပေးပါရန် ဒေသခံ တစ်ဦးက Myanmar News Now ကို ပြော ပါ သည်။ နောက်တ န်ခူး လတွင် လည်း ကျောင်းကြီး ရှင်ချစ် ဂေါစဂန် (၅၃)ရွာ ယောဘုရားပွဲတွင်လည်း နှစ်စဉ် အရက်ဆိုင်၊ ဘီယာဆိုင်များ၊ ခွင့်ပြု ရောင်းချ သည့်အတွက် ပွဲ ဆူပူမှု ဖြစ်ပေါ်လာမည်ကို ပြည်သူ များ စိုးရိမ် နေကြောင်း သိရသည်။
လိင်ဝန်ဆောင်မှုကို စကိုင်းပ်မှကြည့်ရှုကာ အမိန့်ပေးသူ တရားစွဲခံရ
Posted by drmyochit Tuesday, March 26, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ပြည့် တန်ဆာ အဲလက် ဆီသည် အသက် ၆၁ နှစ် အရွယ် အဖိုးကြီး တစ်ဦးနှင့် အနှိပ် ခုံပေါ်တွင် ဒေါ်လာ ၂၅၀ တန် ၀န်ဆောင် မှု ပေးနေ သည်ကို ၎င်း၏ လုပ် ငန်းဖော်က အိမ်မှာ ကွန်ပျူတာနှင့် စကိုင်းပ်မှ တဆင့် ကြည့်နေ သည်ကို ဂျူရီ လူကြီး များအား ဗီဒီိယို အခွေပြပြီး အမှု လိုက်က တင်ပြ ခဲ့သည်။
အဲလက်ဆီ ကိုယ်တိုင် ရိုက်ကူး ထားသော မလိုလားဖွယ်ရာ သက်သေပြ ချက်များမှာ ၎င်းဧည့်သည်နှင့် ကြေးညှိ နေသည့် အတွက်နှင့် ၀န်ဆောင်မှုအပြီး ငွေလက် ခံနေ သည့် အကွ က်များ ဖြစ်သည်။ ပြည့်တန် ဆာမှုကို အားပေး သည့် အတွက် တရား ရင်ဆိုင် နေရသည့် မာ့စ်စ ထရောင်းကို အစိုးရ ရှေ့နေက အဲလက် ဆီကို စကိုင်းပ်မှ ကြည့်နေသည့် အပြင် တစ်ရင်လျှင် ဧည့်သည် နှစ်ယောက်သာ လက်ခံရ မည့် အစား သုံးဦး လက်ခံစေရန် တိုက်တွန်းသည့် အတွက် တရား ရင်ဆိုင် စေခြင်း ဖြစ်သည်။
ဧည့်သည်များ ၀န်ဆောင်ပေးရာတွင် ၀န်ဆောင်မှုကို ဗွီဒီယို ကင်မရာမှ ကြည့်ရှုခြင်း လည်း ပါဝင်သည်။ အဲလက် ဆီက မနက်ဖြန်အတွက် တစ်နာရီစီ ကြာအောင် လူနှစ်ဦးကို ၀န်ဆောင်မှု ပေးရမည်ဟု ဆိုချိန် တွင် သုံးဦးနှင့် တွေ့ဆုံလျှင် ပိုကောင်းမည် မဟုတ်လားဟု မေးခဲ့သည့် သူမှာ စထရောင်းဖြစ်သည်ဟု ရှေ့နေ က ပြောသည်။ အဲလက်ဆီက နောက်ရက်တွင် ကောင်းတက်ရန် ရှိနေသေး သဖြင့် မဖြစ်နိုင် ဆိုသော် လည်း ထိုလူက သုံးယောက်ကို လက်ခံ ထား ပြီးပြီဟု ပြောကာ သူမကို တိုက် တွန်း သည်ဟု ထွက် ဆို သည်။ ယင်းနောက် သူမ အတွက် မည့်သည့် ဧည့်သည် မျိုးကို လက်ခံ ပေးရမည်လဲဟု မေးသည်။
ဂျူရီ များကို ပြသည့် ၎င်း ၃၆ မိနစ်ကြာ ရိုက်ကူး ထားသော ဗွီဒီယိုမှာ အဲလက်ဆီ အိမ်မှ သိမ်းယူ ရရှိပြီး ၎င်းကို စထရောင်း ကွန်ပျူတာထဲတွင် အဲလက်ဆီ၏ ၀န်ဆောင် မှုနှင့် ပက်သက် သည့် အခြားပုံပေါင်း ၁၃၀၀ ကျော် ရှိသေး သည်။ အခြား ရီပို့များလည်း ပါဝင်သည်။ စ ထရောင်း သည် လက်ထပ်ထားသူ တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ကလေး လည်း နှစ်ယောက် ရှိသည်။ သူက အဲလက်ဆီကို လေ့ကျင့်ခန်း စတီဒီယို တစ်ခု အကြွေးနှင့် ထောက်ပံ့ ထားပြီး လုပ်ငန်း တွဲဖက် လုပ်ကိုင်သည်ဟု ထွက်ဆိုသည်။
ထို့အပြင် အဲလက်ဆီနှင့် ပက်သက်မှု ရှိ၍ အဲလက်ဆီ အခြား သူများနှင့် မရှုပ်စေရန် အွန်လိုင်းမှ အွန်လိုင်းမှ စောင့်ကြည့် ခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း ထွက်ဆိုသည်။ အဲလက်ဆီသည် ငွေကြေး လက်ခံပြီး လိင် လုပ်ငန်း လုပ် ကိုင် သူများလည်း ဖြစ်ကြောင်း စထရောင်း ရှေ့နေကဆိုသည်။ အစိုးရ ရှေ့နေကမူ စထရောင်းသည် အဲလက် ဆီ အတွက် ဧည့်သည်များကို လက်ခံ ပေးခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ထို့အပြင် တိုက်တွန်းမှု များလည်း ရှိကြောင်း ပြောသည်။ စတူဒီယိုတွင် အ၀တ်မဲ့ ပုံစ(ပို့စ်)ပေးခြင်း များ လည်း ပြုလုပ်ခိုင်းကြောင်း ဆိုသည်။ ထို့အပြင် အဲလက်ဆီ သူ၏ စတူဒီယိုတွင် ၀န်ဆောင် မှု ပေးနေစဉ် တွင် လည်း ဓါတ်ပုံများ ရိုက်ကူး ထားသည်ကို ဂျူရီများက တွေ့ရှိသည်။ ၎င်းပုံများ ရိုက်ကူး ထားခြင်းကြောင့် စထရောင်း သည်ကို ဂျူရီများက တွေ့ရှိသည်။
၎င်းပုံများ ရိုက် ကူး ထားခြင်းကြောင့် စထရောင်းသည် လုပ်ငန်း တွင်ကျယ်စေရန် ဆောင်ရွက်ထားသည်ဟု လည်း အစိုးရ ရှေ့နေက ပြောသည်။ စထရောင်း၏ ရှေ့နေကမူ အဲလက်ဆီ သည် လိုက်လဲ ဆွဲဆောင်နေ ကြောင်း ပီဇာ ပို့သည့် အလုပ်သမား ကိုပင် မုန့်ဖိုး ပေးဆွဲဆောင်ခဲ့ကြောင်းဆိုသည်။
အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ရပ်များကြောင့် ရန်ကုန်ရှိ အမေရိကန် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများအား အရေးပေါ် သတိပေးချက် အမေရိကန် အစိုးရ ထုတ်ပြန်ထား
Posted by drmyochit Tuesday, March 26, 2013, under သတင်းများ | No comments
အမေ ရိကန် အစိုး ရမှ လူမျိုးရေး အကြမ်း ဖက်မှု များကြောင့် မင်္ဂလာဈေးနှင့် ယုဇန ပလာဇာ အနီးတ၀ိုက် ကိုရှောင်ကြဉ်ကြရန် ရန်ကုန်ရောက် အမေရိကန် နိုင်ငံ သားများသို့ အရေးပေါ်ကြေငြာချက် တစ်စောင်ကို မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန် ထားကြောင်း သိရပါသည်။
မင်္ဂလာဈေးနှင့် ယုဇနပလာဇာ အနီးတ၀ိုက်ကို ရှောင်ကြဉ်ကြရန် ယခင်ရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှစသော မန္တလေး တိုင်း ဒေသကြီးတ၀ိုက်ရှိ လူမျိုးရေး အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် လူထုအတွင်း ပြင်းထန်သော စိတ် ခံစား ချက် မျိုးစုံကို ဖြစ်စေခဲ့သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံသားများအတွက် ခြိမ်းခြောက်မှုမျိုး ဖြစ်နိုင်ခြေ မရှိသော် လည်း မင်္ဂလာဈေးနှင့် ယုဇနပလာဇာ အနီးတ၀ိုက် ကိုရှောင်ကြဉ်ကြရန် အထူး သတိပေး လိုသည်။ ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့သော တင်းမာမှုများကြောင့် ဈေးဆိုင်များပိတ်လိုက်ရသည်။ အနီးတ၀ိုက်တွင် ရဲတပ် ဖွဲ့အင်အား အများအပြား ချထား သည်ဟု သိရသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကို အမြဲနားစွင့်နေရန်၊ သံသယဖြစ်ဖွယ်တစ်စုံတစ်ခု ရှိပါက နီးစပ်ရာ အာဏာပိုင် အဖွဲ့ အစည်းသို့ အကြောင်း ကြားရန် တိုက်တွန်းလိုသည်။
ခရီးသွားများအနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံ အခြေအနေ Update ကို
ကိုဦးစွာဖတ်ရှုရန် အမေရိကန်နိုင်ငံသားများ အရေးပေါ် လိုအပ်ပါက သံရုံးဖုန်း နံပါတ် (95)(9) 5124330 သို့ခေါ်ဆို၍ Duty Officer (သို့) Consular Officer သို့ပြောဆိုရန် ညွှန်ကြားထားသည်။
သောကြာနေ့ ကဖြစ်ပွား ခဲ့တဲ့ မီးလောင် ကျွမ်းမှုဟာ ၀ါးနဲ့ ဖက် တို့ဖြင့် ဆောက် လုပ် ထားတဲ့ ဒုက္ခသည် နေအိမ်ခေါင် မိုးပေါ်မှာ မီးစတွေ ကျလာ ရာကနေ စတင်လောင် ကျွမ်းခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း မျက်မြင် တွေ က ထိုင်း ရဲတွေကို ပြောပြ ခဲ့တဲ့ အတွက် တောမီး ကေ နစလောင် တာလား ဒါမှမဟုတ် ထမင်း ချက်ရာ ကနေ ပေါ့ ဆမှုကြောင့် လောင် တာလား ဆိုတဲ့ အချက်နှစ်ခုပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေး မှု တွေပြုလုပ်သွား မယ်လို့သိရပါတယ်။
မီးလောင် ကျွမ်းမှုနဲ့ ပတ် သက်ပြီး ကရင်နီ အမှတ်- ၂ ဒုက္ခသည် စခန်း ကော်မီတီ ဥက္ကဌ နော်ရှယ်လီသန်း က ကန္တာရ၀တီတိုင်း (မ်)ကို ယခု လိုပြော ပါတယ်။
"ပြောရတော့ ခက်တယ် ကျမတို့ အနေနဲ့ရိုးရိုးမီးလောင်မှုလို့ ပဲ ပြောချင်တယ် ဒါပေမဲ့ ဒီလူထုတွေရဲ့ ပြောဆိုချက် အရ နည်းနည်းတော့ သံသယဖြစ်ချင်တယ် ဥပမာမီးက တနေရာနဲ့တစ်နေရာခုန်ကူး တာတို့ နောက်ပြီးတော့ ဟိုး…. တဲကလေးနှစ်လုံးက စခန်းနဲ့ဘာမှ မဆိုင်ပဲနဲ့ မီးကလောင်သွားတာ တကယ် ဆို အဲဒါ နည်းနည်း စဉ်းစား စရာ ဖြစ်တာပေါ့။"
မီးစလောင် တယ်ဆိုတဲ့ အိမ် ကိုမီးသွားရောက် ငြိမ်းသတ် ရာမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဒုက္ခသည် လူငယ်တဦးက ယခုလို ရှင်းပြပါတယ်။
"ပထမဆုံး မီးဘယ်လို စလောင်လဲ ဆိုရင် ဒီ..သူများပြော တာက ရပ်ကွက် ၁မှာမီးလောင် တယ်ပေါ့နော် မီးလောင်တော့ ကျနော် တို့ ပြေး တက် လာကြည့်တော့ ဒီနားလေးက ဦးလေး ဦးစောဘဦးအိမ်က လားမ သိဘူး အဲ့ဒီမှာ စလောင် တာပေါ့နော် သူက မီးရှို့ သ လိုမျိုး သူ များပြော တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် တကယ်တော့ မဟုတ် ဘူး လူက မရှိဘူး လူလည်း မရှိဘူး မီးလည်း မမွေးထားဘူး မီးက မတောက် ဘူးပေါ့နော်။ မီးက တခါတည်း အိမ်ခေါင် မိုးပေါ် ကနေ အထိပ် ကနေ အပေါ် ဆုံးကနေ အဖျား ကနေ စလောင် ပလိုက်တာ မီးလောင် တာက ကျနော်ထင် တာက ရိုးရိုးလောင် တာ မဖြစ်ဘူး။ ဘယ် လိုပြောမလဲ ဒီ မှာလောင်တယ် ဆို ဒီမှာ ငြိမ်းနေတာ ဟိုဖက် အဲ့လိုမျိုး သွားလောင်တာ ပြီးတော့ ဒီ မှာလောင်ပြီးတဲ့ ချိန်မှာ ကျနော်တို့ ဘာလဲ ပြီးရင် ဟိုး အောက်ဆောင်မှာ လောင်တယ်"
ဒုက္ခသည်အများအပြား သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ အခြေအနေကို သတင်းသွားရောက် စုဆောင်းတဲ့ ကန္တာ ရ၀တီတိုင်း (မ်) သတင်းထောက် တဦးက ယခုလိုပြောပါတယ်။
"ရပ်ကွက် ၁မှာ မီးစလောင်တော့ အော်လံနဲ့စခန်းအုပ်ချုပ်ရေးက ကြော်ငြာပေးတယ်ပေါ့နော်။ လာကူကြ ရပ် ကွက် ၁ မီးလောင်နေ တယ်ပေါ့လေ။ အဲတော့ သူများတွေက သွားကူနေကြတဲ့အချိန် ရပ်ကွက် ၄ ကလူတွေ လည်းပဲ သွား ကူကြ တယ်တဲ့။ ကူရင်းနဲ့ ရပ်ကွက် ၄ မီးထပ်လောင်နေပြီ ပြောတော့ ရပ်ကွက် ၄ ရပ်ကွ က်သူ ရပ်ကွက် သားတွေက သူတို့ရပ်ကွက်ဖက်ကို ပြန်သွားကြည့်တော့ မီးတော် တော့ကို လောင် ကျွမ်းနေပြီ ဆိုတော့ ပြန်ကူလို့ မမှီတော့ဘူး။ ပြေးလမ်းက ပိတ်ကုန်တော့ တောင်စောင်းဘက် ကို ပြေး တက်ကြ တဲ့အချိန်မှာ မီးလိုင်းတွေက ကြီးတော့ ဘာမှလဲ မလုပ်တတ်ကြတော့ဘူးတဲ့။ အဲဒါကြောင့် ရပ်ကွက် ၄ ကလူတွေ အများကြီး သေဆုံးခဲ့ရတယ်။"
မတ်လ ၂၂ရက်က ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဟောင်ဆောင်ခရိုင်အတွင်းရှိ မယ်စူရင်း ဒုက္ခသည်စခန်း (ကရင်နီ အမှတ်-၂ ဒုက္ခ သည်စခန်း) မှ လူအများစုနေထိုင်တဲ့ ရပ်ကွက်နှစ်ခုလုံး မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့ အတွက် အမျိုး သမီးနဲ့ ကလေး အပါအ၀င် လူ ၃၇ ဦးသေးဆုံးပြီး လူဦးရေ ၂၃၀၀ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
မီးလောင် မှုကြောင့် ရပ်ကွက်(၁) မှ ၂ ဦး ရပ်ကွက် (၄) မှ ၃၅ ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ တောမီးကနေ တဆင့်ကူး စက်ပြီး စလောင်ကျွမ်း တာလား ဒါမှမဟုတ် ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ ပေါ့ဆမှုကြောင့် အိမ်မီးကနေ စလောင် တာလား ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အဖြစ်မှန်ကို စုံစမ်း စစ်ဆေးနိုင်ဖို့ မယ်ဟောင်ဆောင် မြို့ဝန်က ရဲတွေကို မနေ့က စပြီး ညွန်ကြားချက် ပေးထားတယ်လို့ ယမန်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်ပို့စ် အင် တာနက် သတင်း စာမျက်နှာမှာ ရေးသားထားပါတယ်။
ကောင်း ကင်ပေါ်က မီးစတွေကျလာတာကို ဒုက္ခသည် အများ စုတွေ့ ရှိကြောင်း... ဘန်ကော်ပိုစ့်ကမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
အကျဉ်းစခန်းတွင် အစောင့်များ၏ ညလုံးပေါက် မတရားကျင့်ခံရသည့် အမျိုးသမီးများက တရားခံများကို ရုံးတင်နိုင်ခဲ့
ဘော့စ၀ါနာ အကျဉ်း စခန်းတွင် အစောင့်များ၏ ညလုံးပေါက် မတရား ကျင့်ခံရသူ အမျိုး သမီးသည် သူ(မ)၏ ကြောက် မက်ဖွယ် အဖြစ် ဆိုးကို ဖော်ထုတ်ကာ တရားခံများကို ရုံးတင် ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ သည်။ နျူရှာတာစီဘက်သည် ညလုံးပေါက် ကြုံတွေ့ ရမှုများကြောင့် စိတ် ဒဏ်ရာ ရနေသည့် အမျိုးသမီး ၃၇ ဦးတွင် အပါအ၀င် ဖြစ်ပြီး လက်တွေ့တွင် သူတို့သည် အချင်းချင်း ၎င်းအကြောင်းကို ပြောဆိုခြင်းပင် မပြုနိုင်ကြပေ။
စောင်းငဲ့ ကြည့်ရုံဖြင့်ပင် မည်မျှ ခံစားရသည်ကို ကိုယ့်တွေ့နှင့် ကိုယ်ချင်းစာ နိုင်သည်။ သို့သော် စီဘတ်၏ ဆောင် ရွက် အားထုတ်မှုတွေကြောင့် သူတို့ စုစည်းကာ ဘော့စနီးယား တစ်လျှောက်ရှိ အမျိုးသမီးများသည် တရားရုံး တွင် နိုင်ငံတက ဥပဒေများအရ သက်သေ ထွက်ဆို နိုင်ကြပြီ ဖြစ်သည်။ လူသုံးဆယ်သည် သည်ဟိတ် ရှိ နိုင်ငံတကာ စစ်ခုံရုံးတွင် တရားစွဲ ခံနေရပြီး ကျန် ၃၀ မှာ ဆက်လက် စစ်ဆေးဆဲဖြစ်သည်။ စီဘတ်သည် သူမ ကို နှစ်လ တိုင်တိုင် ညလုံးပေါက် အကြမ်းဖက်ခဲ့သူကို ရုံးတင်နိုင်ခဲ့သည်။
သို့သော် သူမ ထိုသော ဆောက်ရွက်နိုင် ရန် လျှောက်လှမ်းခဲ့ရသည့် ခရီးကား ခက်ခဲလှသည်။ ပထမပိုင်း က သေ ပစ် လိုက်ရန်သာ ဆုတောင်း နေခဲ့ သည်။ နှိပ်စက်မှု များကြောင့် သေသွားလျှင်ပင် ဘုရား သခင် ကို ကျေးဇူးတင် နေဦးမည် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဘော့ စနီးယား ဆာဘ် အစောင့်များ၏ သတ်ဖြတ် နှိပ်စက် မှု များကို လည်း သူမ မြင်တွေ့ ခဲ့ရ သေး သည်။ သူမကို နံရံနှင့် ကြမ်းပြင်ပေါ်ရှိ သေသူတို့နှင့် နှိပ်စက် ခံရသူ တို့၏ သွေး များကို ရှင်းလင်းခိုင်းသည်။
၎င်းတို့ ၏ မျက်နှာ များကို မှတ်မိနေအောင် ကြည့်ထားရမည်။ တစ်နေ့ ရုံးတင်လျှင် မှတ်မိအောင် ဖြစ်သည် ဟုလည်း ကိုယ့်ကို ကိုယ် သတိ အမြဲပေး နေရသည် ဟုလည်း ပြောပြသည်။ တစ်နေ့တွင် လောက ငရဲ အဆုံးသတ် လိမ့်မည်ဟု နောက်ပိုင်းတွင် ယုံကြည် လာကြောင်း အေပီသို့ သူမက ပြောသည်။ လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု ဆိုင်ရာ ကုလ အထူး ကိုယ်စားလှယ်က စီဘတ်နှင့် အခြား အမျိုးသမီးများသည် စစ်အတွင်းက ယင်းသို့ ပြုမူ သူများ ကို ပြစ်ဒဏ် စီရင် နိုင်အောင် ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ယင်းသို့ ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ၎င်းတို့၏ အတွေ့ အကြုံများ အပေါ် မျှဝေပေးသော သူများကို လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု ဆိုင်ရာ ကုလ အထူး ကိုယ်စား လှယ်က အားပေး ခဲ့သည်။ သို့မှသာ ယင်းသို့ ကြုံတွေ့ ခဲ့ရသည့် အမျိုးသမီးများ အပေါ် ခွဲခြား ဆက်ဆံ ခြင်းများ ပျောက်ကာ ကူညီမှုများ လုပ်လာမည်ဟုလည်း ဆိုသည်။ ဘော့စ၀ါနာ၏ ၁၉၉၂-၉၅ စစ်ပွဲ သည် သွေးထွက် သံယိုမှု အများဆု့း လက်ကိုင် စစ်ပွဲ ဖြစ်သည်။ လူပေါင်း တစ်သိန်းကျော်လည်း သေဆုံး ခဲ့ရ သည်။ ယူဂို ဆလဘ်ဖက်ဒရေးရှင် ပြိုကျပြီး လွတ်လပ်ရေးများလည်း ခွဲယူကြသော အချိန်ဖြစ်သည်။
မမှန်မကန် တရားစီရင်ခဲ့သည်ဟု ယူဆရသော အမှုတစ်ခုကို လွှ...
သမီး ဖြစ်သူကို အဓမ္မ ပြုကျင့်ရန် ကြံစည် သူကို အမှု ဖ...
အညာ(၅)ရွာ ဘုရားပွဲတော်တွင် အရက်သမားများ ဆူပူအကြမ်း...
လိင်ဝန်ဆောင်မှုကို စကိုင်းပ်မှကြည့်ရှုကာ အမိန့်ပေးသူ...
အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ရပ်များကြောင့် ရန်ကုန်ရှိ အမေရိကန် ...
အကျဉ်းစခန်းတွင် အစောင့်များ၏ ညလုံးပေါက် မတရားကျင့်...